Sanjay Dutt Xabsiga Miyuu Dib Ugu Laaban Doonaa? | Filimside –
Sanjay Dutt Xabsiga Miyuu Dib Ugu Laaban Doonaa?
Taariikh: July 27, 2017:
Super Star Sanjay Dutt dood xoogan ayaa laga keenay sababta xili hore sanadkii hore xabsiga looga soo daayay waxayna dalbadeen maxkamada sare ee Bombay in arinkaan sharaxaad laga bixiyo.
Maamulka gobolka Maharashtra waxay aqbaleen fariinta kaga timid maxkamada sare ee Bombay waxaana baaritaan lagu sameyn doonaa sababta Dutt xili hore xabiga looga daayay ayadoo bilooyin u harsaneyd.
Maamulka Maharashtra waxay sheegeen in Sanjay Dutt xabsiga xili hore looga daayay inuu ahaa mudadii uu xabsiga ku jiray muwaadin aqlaaqdiisa wanaagsan tahay sidoo kalena awaamirta xabsiga u hogaansami jiray.
Laakiin maxkamada sare waxay sheegtay inay heyso warbixin ku aadan Sanjay Dutt in xabsigiisa bilooyinka kaga harsanaa looga dhaafay inuu yahay atoore caan ah balse waajib sharci ah waqtigiisa looga cafinin.
Hadii ay cadaato in Dutt xili hore xabsiga looga sii daayay arimo ku aadan inuu jilaa yahay iyo shaqsi magac leh waxay sababi doontaa xidigaan inuu xabsiga dib ugu laabto sidoo kalena dhameesto waqtigii laga cafiyay!
Sanjay Dutt xabsiga waxaa laga soo daayay bishii Febraayo ee sanadkii hore ayadoo waqtigiisa 8-bilood kaga harsaneyd laakiin sheegay in bilooyankaas looga cafiyay aqlaaqdiia xabsiga oo aad u wanaagsaneyd.
Ugu dambeyntii sheekadan dulucdeeda waxay tahay hadii maxkamada sare amar soo saarto in Sanjay Dutt xabsiga dib ugu laaban doono sidoo kalena uu soo dhameesan doono 8-bilood ee waqtigiisa laga cafiyay!
Waxaa Aqriyay: 1,457
markaan cml ayaa naceysaa wadama musuqmaasuqa hareeyay war mee iska dhaafaana maskiinkaan nolosha ayey ku cariiriyeen
Aaltumooda soo laabo baan ku leenahay sxb